Mid kamid ah Weerarada Ismiidaaminta ah ee Ugu Qasaaraha badnaa oo ka dhacay Bagdaad (Daawo Sawirada) - iftineducation.com
Mid kamid ah Weerarada Ismiidaaminta ah ee Ugu Qasaaraha badnaa oo ka dhacay Bagdaad (Daawo Sawirada)
iftineducation.com – Gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyay ayaa lagu weeraray goobo mashquul badan oo kuyaala Magaalada Bagdaad ee caasimada dalka Ciraaq, waxaana weerarkan ka dhashay qasaaro badan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac.
Weerarkan ayaa ka dhacay goob ay ku yaalaan xarumo ganacsi oo kutaala xaafada Shiicada ay ku badan tahay ee Karrada oo kutaala bartamaha magaalada Bagdada, waxaana halkaasi gaari ku qarxiyay nin waxyaabaha qarxa isku soo xiray.
Inta la xaqijiyay qaraxan Ismiidaaminta ah waxaa ku dhintay dad gaaraya 82-qofood, waxaa sidoo kale ku dhaawacmay dad gaaraya 200-qof, waxaana laga cabsi qaba an qasaaraha dhimasho uu intaan kasii bato.
Ra’isul Wasaaraha dalka Ciraaq Haider al-Abadi , ayaa booqday goobta uu ka dhacay weerarakan ismiidaaminta ah, waxa uuna si kulul u canbaareeyay weerarkaasi isagoona dalbaday in si wadajir ah looga hortagao kooxaha argagaxisada ah.
Kooxda Daacish ayaa durba dusha saaratay masuuliyada weerarkan dadka badan lagu dilay, waxaana weerarkan uu noqonayaa kii ugu qasaaraha badnaa ee sanadkan ka dhaca magaalada Bagdaad ee caasimada dalka Ciraaq.
Daawo Sawirada” Faransiiska oo Xulka Iceland ku dur duriyay & 4-Koox oo Semifiinalka Euro iskugu soo hartay
Asma : riyadaan ku biya baxaa habeen walbo ila taliya